ငယ်ငယ်လေးတည်းက ကျွန်တော်ပုံဆွဲခဲ့တယ်။ အဖေနဲ့အမေလက်ကို တွဲထားတဲ့ ကလေးငယ်ကျွန်တော်ပါဝင်တဲ့ မိသားစုပန်းချီကလေးကားချပ်လေးတွေပေါ့။ အခုလည်း မိသားစုဆိုတဲ့ ပန်းပုရုပ်ထဲမှာ ကျွန်တော့်ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ကလေးငယ်ရုပ်တုလေးထည့်သွင်းချင်တယ်။ မိဘချစ်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့ ကလေးငယ်တစ်ယောက်လေ - မိန်းကလေး အသုံးအဆောင်တွေကို နှစ်သက်တဲ့စိတ်ကို ချိုးခြေလိုက်ပြီး ယောက်ျားဆန်ခြင်းဆိုတဲ့ ပုံစံ ခွက်ထဲမှာ တတ်နိုင်သမျှနေခဲ့တယ်။
ကျွန်တော်နားလည်တဲ့ ယောက်ျားဆန်ခြင်းဆိုတာ စိတ်လှုပ်ရှားမှုနည်းအောင်နေခြင်း၊ သန်စွမ်းအင်အားရှိတဲ့ပုံပြခြင်း၊ ခက်ထန်မာကျောလေဟန်ဆောင်ခြင်းပါပဲ။ ယောက်ျားတစ် ယောက်လို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ သန်စွမ်းရန်လိုတဲ့ကျွဲကြီးကို မြင်ယောင်မိတော့တာပဲ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့် အပြုအမူ၊ အပြောအဆိုတွေက သဘာဝမကျဘဲ စက်ရုပ်လို တောင့်တောင့်ကြီး ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ ခင်ဗျားလည်းသိမှာပါ။ ပန်းပုထုတဲ့အခါမှာလည်း စိတ်ဝိညာဉ်မထည့်တဲ့အခါ စက်ရုံက ထုတ်လုပ်လိုက်သလို အသက်ကင်းနေဟန်မျိုးလေ။
ကျွန်တော့်ရဲ့ပုံတူကလေးရုပ်တုကိုတော့ အသက်ဝင်စေချင်ပေမယ့် မိန်းမဆန်ခြင်း ကို တတ်နိုင်သမျှ တွန်းထုတ်နေတဲ့ဟန် မထည့်ချင်ဘူး။ စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုဝဲကတော့အလယ်မှာ ကြောက်လန့်တကြားနဲ့ ကယ်ပါ၊ ကူပါဆိုပြီး လက်မြှောက်အော်ဟစ်နေတဲ့ကလေးတစ်ယောက် ပုံစံမထုချင်ဘူး။ ကျွန်တော့်ပန်းပုရုပ်ကလည်း သဘောမတူဘူး။ ပန်းပုက အသက်ဝင်လာတဲ့အခါ ကျွန်တော့်ကို ဦးဆောင်သွားတယ်။ သူ့အရိပ်ကို ဖမ်းမိဖို့ကတော့ လေ့ကျင့်သား ပြည့်ဝလာရင် မခက်ခဲပါဘူး။
အခုပန်းပုရုပ်ကလေးက တောင်းဆိုနေတယ်။ သူက ပြုံးပျော်နေချင်တယ်တဲ့။ နာကျင်ဝမ်းနည်းရိပ်ကလေး ဖြည့်မယ်ဆိုတာတောင် လက်မခံဘူး။ သူက ညီ့ပုံရိပ်ကိုမဖော်ခင် သွေးပူအောင် အစမ်းလေ့ကျင့်တဲ့ ဟန်ပြရုပ်တု မဟုတ်တော့ဘူး။ တကယ်ဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော့်ဆန္ဒကို ထွင်းထုနေတာဖြစ်သွားပြီ။ ပကတိပြင်ပမှာ ကျွန်တော်မပျော်တတ်ခဲ့ဘူးလေ။
အဖေ၊အစ်ကိုတွေနဲ့ ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ ကျွန်တော့်အကြားဆက်သွယ်မှုက မသန်စွမ်းခဲ့ဘူး။ မိန်းကလေးတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းရတာကိုပဲ ပိုမိုနှစ်သက်ခဲ့တယ်။ ဘယ်မိန်း ကလေးမှ ကျွန်တော့်ကို နှိမ့်ချပြီးခေါ်ဝေါ်တာ၊ လှောင်ပြောင်တာ မပြုကြဘူးလေ။ တခြားယောက်ျားလေးတွေဆီက 'အခြောက်၊ မိန်းမလျာ'ဆိုတဲ့ လှောင်ပြောင်ကဲ့ရဲ့သံတွေကြားရတယ်။ ဒေါသဆူပွက်နေပေမယ့် လက်တုံ့မပြန်နိုင်သလို ခွန်းကြီးခွန်းငယ်မပြောနိုင်ဘူး။ ဒေါသက နှလုံးသားအောက်ခြေမှာ အနည်ကျနေတဲ့ဝမ်းနည်းမှုကို လှုပ်ခတ်စေပေမယ့် နှုတ်ခမ်းကိုတင်းတင်းစေ့ထားရတာ သွားတွေတောင်နာကျင်လာတယ်။ ကျွန်တာ့်အဖြစ်ကိုသိရင် ညီလည်း အနိုင်ကျင့်သူတို့ကို မုန်းမှာပဲ။
သူတို့နဲ့ တတ်နိုင်သလောက်ရှောင်နေမိတယ်။ သေချာတာက ယောက်ျားတွေနဲ့ ကျွန်တော်ကြားမှာ အမုန်းစည်းခြားထားတယ်။ သူတို့တားတဲ့စည်းပါ။ ကျွန်တော့်ကို လူသားတစ်ယောက်လို့ ဘာလို့ အသိအမှတ်မပြုနိုင်ရတာလဲ။ ကျွန်တော်က ခြားနားနေတာနဲ့ စော်ကားလို့ရမယ်လို့ ထင်ကြတယ်။ ဗိုလ်လုပ်နိုင်မယ်၊ ဝံ့ကြွားနိုင်မယ်လို့ ထင်ကြတယ်။ ကျောင်းမှာ နာမည်ပြောင်နဲ့အလှောင်ခံရတယ်။ အိမ်မှာအဖေက အထင်သေးပြီး ထိန်းချုပ်ဖို့ ကြိုးစားတယ်။ ပြေးစရာမြေမရှိတဲ့ ကျွန်တော်ဒေါသထွက်တယ်။ ကြေကွဲတယ်။ အရှက်ခွဲခံရတာ ကြာလာတော့ စိတ်ဓာတ်ကျလာတယ်။ ကလေးဆိုတော့ ဝမ်းနည်းနာကျင်မှုကို သေးငယ်ပပျောက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိဘူးလေ။
ဆူးတွေကြားမှာ ဖြတ်သန်းအသက်ရှင်ရတဲ့ဒဏ်ကို ကလေးမို့သည်းမခံနိုင်ဘူး။ ပြုံးနေရပေမယ့် ဘယ်လိုမှနေမသာတဲ့တစ်နေ့မှာတော့ အိမ်က ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။ ညီ့ကိုတောင် မပြောဖြစ်သေးတဲ့ ငယ်ဘဝစွန့်စားခန်းလေ။ သုံးတန်းအောင်ပြီးလို့ လေးတန်းတက်မယ့်အချိန်၊ နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်တွေ အပြီးမှာ ကျောင်းသွားအပ်ပြီး အမေက အသိအိမ်မှာနေခဲ့တယ်။ ကျွန်တော် တစ်ယောက် တည်း အိမ်ပြန်သွားပြီး စုဗူးထဲကပိုက်ဆံတွေကို ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ စာကြည့်တိုက်ကို သွားတယ်။ ညနေနှစ်နာရီ စာကြည့်တိုက်ပိတ်ချိန်ထိ စာအုပ်တွေထိုင်ဖတ်နေတယ်။
စာဖတ်ရင် အချိန်ကိုမေ့သွားသလို အိမ်ကခိုင်းလိုက်တာလည်း အမှတ်မရတော့ ဘူး။ ဖတ်စရာလုံးလုံးကုန်မှ အိမ်ကို အူကြောင်ကြောင်ပြန်ရောက်ရင် အဖေက ရိုက်လေ့ရှိ တယ်။ ထားပါတော့ဗျာ။ အဲဒီနေ့က စာကြည့်တိုက်က ပိတ်တဲ့အခါ ဗီဒီယိုရုံကိုသွားတယ်။ ဇာတ်ကားတစ်ကားပြီးတော့ ၅ နာရီထိုးလောက်ဖြစ်သွားပြီ။ စိတ်ထဲမှာ လေးပင်နေတယ်။ ကြောက်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ အိမ်မပြန်ရဲ တာလည်း မဟုတ်ဘူး။ မပြန်ချင်တော့တာ။ ပြီးတော့ ကားဂိတ်ရောက်သွားတယ်။ မိတ္ထီလာကို သွားမယ့်ကားတစ်စင်းထွက်လာတယ်။ မိတ္ထီလာ၊ မိတ္ထီလာလို့အော်တော့ မိတ္ထီလာ-ချောက်မြို့ ကားလမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ အဘိုး၊ အဘွားတို့ရွာကို သွားရင်ကောင်းမယ်လို့တွေးပြီး တက်လိုက်သွားဖြစ်တယ်။
လမ်းမှာ ကားဘီးပေါက်တယ်။ လမ်းမှာလည်း တွေ့သမျှမုန့်တွေ ဝယ်စားသေး ပေမယ့် ပိုက်ဆံတွေက အများကြီးကျန်သေးတယ်။ မိတ္ထီလာကိုရောက်တော့ ညကိုးနာရီ လောက်ဖြစ်နေပြီ ထင်တယ်။ ကားပေါ်ကဆင်းပြီး လမ်းမကြီးပေါ် ဟိုဘက်လျှောက်လိုက် ဒီဘက်လျှောက်ရင်း ဘုရားကြီးတစ်ဆူတွေ့တော့ ငါဘုရားပေါ်တက်အိပ်မယ်လို့ တွေးတယ်။ ချောက်ကို ထွက်မယ့်ကားမရှိတော့ဘူးဗျ။ တစ်ညအိပ်ရတော့မှာ။ နောက်တော့ အုတ်ကျင်းရပ်ကွက်မှာနေတဲ့ ဦးလေးတစ်ယောက်ကို သတိရတာနဲ့ ဘယ်လိုသွားရသလဲဆိုပြီးတော့ လမ်းဘေးကအိမ်တစ်အိမ်ကို ဝင်မေးတဲ့အခါ သူတို့က မေးတယ်။
'အုတ်ကျင်းကို ဘာသွားလုပ်မှာလဲ'တဲ့။ 'ပျဉ်းမနားကလာတာ။ မိဘတွေနဲ့ ကွဲလာလို့ အုတ်ကျင်းမှာ အဖေ့ညီဝမ်းကွဲတစ်ယောက်ရှိတယ်။ ကိုအောင်ကျော်လို့ခေါ်တယ်' လို့ ဖြေခဲ့တယ်။သူတုိ့က 'အုတ်ကျင်းဆိုတာ အကျယ်ကြီးကွ။ မင်းအောင်ကျော်က ဘယ်အောင်ကျော်မှန်းမှ မသိတာ။ ဒီလိုလုပ် ရဲစခန်းသွားကြမယ်။ ခုလောက်ဆို မင်းအိမ်က ရဲတိုင်ပြီးလောက်ပြီ'ဆိုတော့လန့်သွားပြီး 'ကျွန်တော်အိမ်က ထွက်ပြေးလာတာ'လို့ ပြောလိုက်တယ်။ နောက်ဆုံးတော့ အိမ်ရှင်က ရဲစခန်းကို ဖုန်းဆက်။ အဖေရောက်လာပြီး ကျွန်တော်လည်း အိမ်ပြန်ရောက်သွားတယ်။
အဖေက ထုံးစံအတိုင်း ကျွန်တော့်ကိုရိုက်ပြီး အမေ့ကတော့ သားစိတ်နဲ့ စိတ်ထောင်းကိုယ်ကြေဖြစ်နေပေမယ့် တစ်လလောက် ကျွန်တော့်ကို စကားမပြောဘူး။ အစ်ကိုနှစ်ယောက်က တစ်မြို့လုံးအနှံ့ ကျွန်တော့်ကို ရှာကြတာ။ မြို့ပြင်က သင်္ချိုင်းတွေရောက်ကြ၊ ရေတွင်းပျက်တွေ ရောက်ကြလို့ ပြန်ပြောကြတယ်။ ထူးဆန်းတာက အဖေနဲ့အမေနှစ်ယောက်စလုံး ကျွန်တော်ဘာကြောင့် အိမ်ကထွက်ပြေးလဲဆိုတာ မမေးကြဘူး။
အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရရင်တော့ ဘယ်လိုအမှတ်တရ၊ အနာတရာကိုမှ မတူးဖော်ချင်တော့ပါဘူး။ အတိတ်ကမ်းစပ်မှာ လေညှင်းခံကာ လမ်းလျှောက်နေတာမဟုတ်ဘူးလေ။ မုန်တိုင်းအလာ မိုးနဲ့လေနဲ့ကြားမှာ အသက်လုပြေးနေရတဲ့အခြေအနေ မဟုတ်လားဗျာ။ အတွေးတွေက အားအင်ကုန်ခမ်းနွမ်းနယ်စေတယ်။ ကလေးဘဝတည်းက စုဆောင်းထားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေက လှိုင်းကြမ်းမုန်တိုင်းတွေဖြစ်လာပြီး ကျွန်တော့်ကိုနှစ်သတ်ဖို့ ကြိုးစားတယ်။
မကြာမီထုတ်ဝေဖြန့်ချီမယ့် အရေးပေါ်အခန်းထဲမှာ ဝတ္ထုရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ဒေသဖြစ်ပါတယ်ရှင် :)
စာရေးသူ မယ့်ကိုး at 3/29/2014 04:47:00 PM3comments:
ကျွန်တော် မပျော်ဘူးအမေ။ အိမ်ပြန်လာချင်တယ်။
ကျွန်တော်ဟာ အစ်ကိုတွေနဲ့မတူတဲ့ ခြားနားသူဖြစ်ကြောင်း၊ သဘာဝကို ထိန်းချုပ်မြိုသိပ်ထားရလို့ ပင်ပန်းဆင်းရဲတဲ့အကြောင်း အမေတို့ကို ရှင်းပြဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ သိခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ယောက်ျားခန္ဓာမှာ မိန်းကလေးစိတ်နဲ့ပိတ်မိနေတဲ့ ကျွန်တော့်သဘာဝဟာ အိမ်သားတိုင်းသိတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ဆိုပါတော့။
လိင်တူချစ်သူတချို့က သူတို့ကဘယ်သူတွေ၊ ဘယ်လိုခံစားနေရတယ်လို့ မိဘတွေကို တိုင်တည်တဲ့အခါ မိဘတွေက အားပေးပံ့ပိုးတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားလည်း ကြားဖူးမယ်။ အဲဒီလိုမျိုး မိဘရဲ့နားလည်မှုလိုချင်ပေမယ့် ကျွန်တော့်ကိုမြင်တိုင်း အဖေက ဒေါသတွေထွက်ပြီး ရိုက်တတ်သလို အမေကလည်း ပြောခွင့်မသာအောင် ပိတ်ပင်တတ်တာမို့ ကျွန်တော်ရဲ့လိင်သဘာဝဟာ ဆွေးနွေးစရာမလိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်နေတယ်။
ပြန့်ကားမို့မောက်လာတဲ့ အတိတ်လွင်ပြင်ထဲမှာ ပန်းပုကို အစီအစဉ်တကျနေရာချထားမိတယ်။ ပန်းပုထုတဲ့အခါမှာ တွေ့ရှိမှုတွေဟာ အံ့သြစရာ၊ ကြည်နူးဝမ်းမြောက်စရာတွေချည်းမဟုတ်ဘူး။ အနည်ကျနေတဲ့ ဝမ်းနည်းနာကျင်မှုတွေကလည်း အကုသခံပျောက်ကင်းဖို့ သိစိတ်မျက်နှာပြင်ပေါ် တက်လာကြတယ်။
အမေက ဘုရားစာတွေဖတ်ခိုင်းတဲ့အခါ အရင်ဘဝက သူများသားမယားကို ပြစ်မှားခဲ့သူမို့ အခြောက်ဖြစ်တာဆိုတဲ့ဆိုရိုးတွေက နှိပ်စက်လွန်းလှတယ်။ မသန့်စင်ခဲ့သူ၊ ယုတ်မာခဲ့သူမဖြစ်ချင်ဘူး။ ကျွန်တော်က အပြစ်လုပ်ထားသူမှ မဟုတ်ဘဲ။ သဘာဝမကျတဲ့ သူ၊ လူစဉ်မမီတဲ့သူဆိုတဲ့ လူတွေရဲ့အပြောကို ဘာဖြစ်လို့ရင်စည်းခံရမှာလဲ။ ဘယ်လို စော်ကားစကားကိုမှ ကျွန်တော် လက်သင့်မခံနိုင်ဘူး။ အရင်ဘဝကို ကျွန်တော်မသိဘူး။ လူတွေဘယ်လိုမြင်မယ်ဆိုတာလည်း အလေးမထားပါဘူး။ အမေနဲ့အဖေသာ ကျွန်တော့်ကြောင့် အရှက်ရမှာစိုးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း မိဘကို စိတ်ချမ်းသာအောင် မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါဘဲ။
ရွံ့စေးနဲ့ ပန်းပုထုတာ လွယ်ကူတယ်ထင်ရပေမယ့် ကျွန်တော့်အတွက်တော့ မိသားစုရုပ်တုဟာ ခက်ခဲတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပဲ။ အမေ့ကို နားလည်ဖို့ခက်သလို အမေ့သွင်ပြင် ကို ဖမ်းမိဖို့လည်း မလွယ်ကူပါဘူး။ ကိုယ်ဟန်ပြတဲ့အရာတစ်ခုရှိမှ ပန်းချီရေးချင်တဲ့သူတွေ လိုပဲ ဓာတ်ပုံတွေရှိပေမယ့် အမေ့အိမ်တစ်ခါလောက်သွားလည်ချင်တယ်။ အမေက ကျွန်တော့်ကို ဘယ်မိန်းကလေးနဲ့မှ စပ်ဟပ်အိမ်ထောင်ချပေးတာ မပြုလုပ်တော့ဘူးလို့ မျှော်လင့်ရတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အဖေနဲ့တွေ့ရမှာကြောက်တယ်။
မနှစ်က သီတင်းကျွတ်သွားကန်တော့ချိန်မှာ အဖေက ပြောတယ်။ 'လာချင်ရင် တစ်ယောက်တည်း လာ။ မင်းအကောင်တွေကို အိမ်ခေါ်မလာနဲ့'တဲ့။ အဲဒီနှစ်က ညီနဲ့အတူသွားဖြစ်ခဲ့တယ်ဗျာ။ 'သူက ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းပါ'လို့ အဖေ့ကိုဖြေခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်က ' Friends with benefit အတူ အိပ်နေသူတွေလို့ ဝန်ခံလို့မှမရဘဲ။
အဲဒီလိုပြောရင် အဖေလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အပြင် မိဘကိုသရော်စော်ကားတယ်ဆိုကာ ကျွန်တော့်ကို ခွေးရိုက်သလိုရိုက်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။ အဖေက မရိုက်ဘူးဆို ရင်လည်း သေသည့်တိုင် ကျွန်တော်တို့ကို ခေါ်ဝေါ်စကားပြောပါဦးမလား။ ထူးဆန်းတာက ညီက ကျွန်တော်တို့တစ်ရပ်ကွက်တည်းသား၊ ငယ်သူငယ်ချင်းမို့ အရင်ကလည်း တွဲသွားတွဲလာနေကြပဲ။ အခုမှ အဖေရိပ်မိလို့ ဒီစကားပြောတာဆိုရင် ချီးကျူးအံ့သြစရာကောင်းလှတယ်။
အဖေက သားအဖြစ်မှ စွန့်လွှတ်မယ်ဆိုလည်း ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော့် လိင်သဘာဝကို ဂုဏ်ယူခဲ့ပြီးပြီ။ ကျွန်တော်က လိင်တူစိတ်ဝင်စားသူဖြစ်တဲ့အတွက် ခေါင်းငုံ့ သိမ်ငယ်စရာအကြောင်းမရှိသလို ဘယ်သူ့ကိုမှ ရွံ့ကြောက်နေစိတ်မထားနိုင်ဘူး။ အမှား မလုပ်တဲ့အတွက် မသိမ်ငယ်နိုင်ဘူး။ ဒီလိုအားတင်းလည်း အမေ့ကိုတောင်းပန်ရင်း အမေ့ပန်းပုရုပ်ကို တည့်တည့်မကြည့်ရဲသေးဘူး။ အမေ့ဟန်ပန်က ညင်သာတယ်။ သိမ့်မွေ့တယ်။ ပြီးတော့ ဝမ်းနည်းမှုတွေ သိုလှောင်ထားတယ်။ အမေ ကျွန်တော့်ကို စိတ်ပျက်နေမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်သိပါတယ်။
အမေ့ပန်းပုရုပ်ရဲ့တိုးတက်မှုက အစပိုင်းမှာ နှေးကွေးပေမယ့် ဟန်ပန်ထင်ရှားလာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆုံးသတ်လို့ရလုပါပြီ။ အချောသတ်မှုကိုတော့ စိတ်တိုင်းမကျဘဲ စိတ်တွေ၊ လက်တွေငြိမ်သက်သွားမယ့်တစ်ချိန်ကို ခိုကိုးရာမဲ့၊ စိတ်ပျက်လက်လျှော့ပြီး စောင့်ချင်တယ်။ ဝေဒနာတွေကို မရှုမလှလက်ပိုက်ကြည့်နေရတဲ့အချိန်တွေမှာ ပန်းပုရုပ်က အဓိပ္ပါယ်အမျိုးမျိုးဖြာထွက် လာတဲ့အခါ ဆေးရောင်ခြယ်ဖို့လည်း တွန့်ဆုတ်နေမိတယ်။
ရုပ်တုက စကားလှမ်းပြောတိုင်းမှာ အသက်ဝင်လာတယ်လို့ ယုန်ထင်ကြောင်ထင်ရုံမက ခြေလွတ်လက်လွတ် ထွက်ပြေးချင်စိတ်ပေါ်တယ်။ အမေ့ပုံတူပန်းပုရုပ်ဟာ ပြီးလုပြီးခင်မှာ ရပ်တန့်သွားပြန်တယ်။ ကျွန်တော့်ပျော်ရွှင်မှုတွေဟာ အမေ့ရုပ်တုထဲကို စိမ့်ဝင် ပျောက်ကွယ်သွားတယ်။
ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောပြော အမေမကြားနိုင်ဘူး။ အမေ ကျွန်တော့်ကို ပြန်လက်ခံလာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ နည်းလမ်းတွေ မရှိပါဘဲ။ အမေ ကျွန်တော့်ကို မျက်ကွယ်ပြုခဲ့ချိန်ကစပြီး လူမှုဆက်ဆံရေးနည်းစနစ်တွေနဲ့ အလှမ်းကွာဝေးဆဲ။ အမေ့ရုပ်တုကရော အဖေ့ရုပ်တုလို လှောင်ပြောင်ဦးမှာလား။ ကျွန်တော် မကြည့်ရဲသေးပါဘဲ။
အဖေ့ရုပ်တုလိုပဲ အမေ့ရုပ်တုကို အနည်းဆုံးနှစ်ရက်၊ သုံးရက်ကြာအောင် အခြောက်ခံထားလိုက်ဦးမယ်။ ဒီအချိန်မှာ ကလေးလေးကျွန်တော့်ရုပ်တုပုံကို အစပြုချင် တယ်။ ခံစားချက်တွေ အရည်ပျော်နေတုန်း ထုဆစ်ပုံသွင်းချင်တယ်။
မကြာမီထုတ်ဝေဖြန့်ချီမယ့် အရေးပေါ်အခန်းထဲမှာ ဝတ္ထုရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ဒေသဖြစ်ပါတယ်။
စာရေးသူ မယ့်ကိုး at 3/26/2014 07:58:00 AM6comments:
‘ မီးရောင်အောက်ကို ဝင်ရင်…’
လူဘုံအလယ်မှာ ကိုယ်က အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ပြောဆိုဆွေးနွေးနေတုန်း လူတစ်ယောက်ရောက်လာပြီး ‘ဘုမသိ ဘမသိ ဝင်ပြောပြီး လူ့လောကမှာ ဘာမှဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်မလုပ်ဘူးသေးဘဲနဲ့ စာလေးတလုံးစ နှစ်လုံးစရေးပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဟီးရိုးအင်း ဖြစ်ချင်နေတဲ့ ငတိမ’ လို့ မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းစော်ကားပြောလာရင် ဘယ်လိုတုန့်ပြန်မလဲ။
ရှင်သာ ဘုမသိဘာမသိဝင်ပြောတာ။ ရှင်ကကော ဘဝမှာ ဘာဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်လုပ်ဘူးလို့လဲ။ ရှင်ကလည်း စာလေးတလုံးစ နှစ်လုံးစ ရေးပြီး ဆရာကြီးလုပ် ဟီးရိုးအင်း ဖြစ်ချင်နေတော့ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ နှိုင်းတာမလားလို့ ပြန်ပြောမလား။ ဒါမှမဟုတ် ကျွန်မ သိသမျှ ပြောတာ၊ ကျွန်မက ဘဝမှာ ဘာတွေဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်လုပ်ထားတာ။ ကျွန်မရေးနေတဲ့စာတွေလို ရှင့်လို ဆရာကြီးလုပ်တဲ့စာတွေမဟုတ်လို့ ဟီရိုးအင်းဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။
ကျွန်မ စာရေးတယ်ဆိုတာ သူတပါးကို အသိပညာပေးဖို့၊ ကိုယ်ချင်းစာတတ်ဖို့၊ ကောင်းကျိုးအဖြာဖြာရစေဖို့ မဟုတ်ဘူး။ ဘယ်သူ့ကိုမှ တရားဟောဖို့၊ တိုက်တွန်းစည်းရုံးဖို့ စိတ်မဝင်စားဘူး။ လူတိုင်းမှာ ကိုယ့်အသိဥာဏ်နဲ့ကိုယ် အနိမ့်အမြင့်ရှိတယ်။ ဘဝတူတစ်ဦးဦးက သူလည်း ဒီလိုခံစားရပါတယ်။ သူ့ကိုယ်စားပြောပေးသလိုပဲဆိုတဲ့ ပဲ့တင်သံကြားချင်ရုံမျှပါပဲ။ဆိုကာ ဖြေရှင်းမလား။ ဒါမှမဟုတ် ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်း ဆဲရေးတိုင်းထွာမှုကို ကိုယ်မယူတဲ့အခါ ဆဲတဲ့သူဆီပဲ ပြန်သွားတယ်လို့ သဘောထားမလား။
တကယ်တော့ဒီအောက်တန်းကျတဲ့ ထိုးနှက်ချက်တွေကို ခဲတစ်လုံးလို ကန်ကျောက်ပြီး မေ့ဖျောက်လိုက်ချင်ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် စိတ်ခံစားမှုဆိုတာ ထားရာနေ၊ စေရာသွား သဘောမျိုးမရှိပါဘူး။ မိုက်ရိုင်းစော်ကားတဲ့အသံကြီးကို ဟိန်းထနေအောင် ကြားနေရတယ်။ အနာပေါ်တုတ်ကျတဲ့အခါ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
အမှန်အတိုင်း ဝန်ခံရရင် ကျွန်မဘဝကို ရိုးစင်းစွာပဲ ဖြတ်သန်းလိုပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် မြို့ငယ်လေးမှာ အပင်လေးတွေစိုက်၊ ပုံလေးဆွဲ၊ အိမ်ကလေးတွေဆောက်၊ ဥယျဉ်တွေပျိုးကာသာ နေချင်သူပါ။ မောက်မာရန်စွာသူကို လက်တုံ့ပြန်လိုစိတ်နဲ့ ဘဝမှာ ဘာတွေဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်လုပ်ပြလိုက်မဟဲ့၊ လုပ်ထားသမျှကို ကြွားလိုက်မယ်ဟဲ့လို့လည်း စိတ်မထားချင်ပါဘူး။
စာကို တစ်သက်လုံးရေးဖို့လည်း မရည်ရွယ်ပါဘူး။ ရေးချင်တဲ့ စာအုပ်လေး သုံးလေးအုပ်လောက် ထုတ်ပြီးရင်ပဲ စာရေးခြင်းကို ရပ်လိုက်တော့မယ်လို့ ကြံစည်ထားသလို ရင်နှီးသူအချို့ကိုလည်း ပြောပြဖူးရဲ့။ ဒါကြောင့် ဘဝအမောတွေကြားမှာ စာရေးချင်စိတ်ပျောက်မသွားခင် စာရေးဖို့ဆိုပြီး ကောင်းမွန်လှတဲ့ အလုပ်က နှုတ်ထွက်ခဲ့တယ်။ မိသားစုတွေ ငြိုငြင်လည်း၊ ခုလို မသိတဲ့သူကအစ နှိမ့်ချစော်ကားလည်း အရေးမထားချင်ပါဘဲ။ လုပ်ချင်တာ လုပ်နေရုံမျှနဲ့ ဘဝမှာ ကျေနပ်ရောင့်ရဲစွာ ပျော်နေချင်သူသာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကတော့ မနာလိုလို့ တိုက်ခိုက်တာပါ ဂရုစိုက်မနေပါနဲ့လို့ ဖြေပြောပါတယ်။ ဒီစကားကို လက်ခံသင့်ရဲ့လား။ ဟင့်အင်း။ လူတွေကထင်ကြတယ်။ အနိုင်ကျင့်သူတွေဟာ အနိုင်ကျင့်ခံရသူထက် နိမ့်ကျနေလို့ ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သိမ်ငယ်နေလို့ မနာလိုစိတ်ကြောင့် အောက်တန်းကျကျတိုက်ခိုက်တာလို့လေ။
မဟုတ်ပါဘူး။ အနိုင်ကျင့်မှုဆိုင်ရာ သုတေသနပညာရှင် မိုင်ရာလင်န် စင်ဒါ ပြောတာကတော့ အနိုင်ကျင့်သူတွေရဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အထင်ကြီးမှုဟာ ပုံမှန် ၊ ဒါမှမဟုတ် အလွန်အကျူးရှိနေတတ်တယ်တဲ့။ ပြီးတော့ အနိုင်ကျင့်သူတွေမှာ တစ်ချို့တလေက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အတိဒုက္ခတစ်ချို့ရှိနိုင်ပေမယ့် အများအားဖြင့် ဘဝင်မြင့်နေကြသလို အပေါင်းအသင်းများသူများဖြစ်ပြီး သူတို့တခြားတစ်ယောက်ကို အနိုင်ကျင့်ခိုက်မှာ သူ့သူငယ်ချင်းတွေကရတဲ့ အရေးစိုက်မှုကို သာယာနေကြတယ်တဲ့။
မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကတော့ ကျွန်မက အကဲဆတ်လွန်းတယ်ဆိုပြီး အပြစ်တင်လိုစိတ်ရှိကြတယ်။ သူတို့အလွန်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတိုင်းပြုလုပ်တတ်ကြတဲ့ အနိုင်ကျင့်ခံရသူကိုသာ အပြစ်တင်ခြင်း ‘victim blaming’ ရယ်ပါ။ ၂၀၁၃ အောက်တိုဘာမှာ NFL က ယောနေသန် မာတင်ဆိုတဲ့ ဘောလုံးသမားတစ်ယောက်ကို တစ်ခြားကစားသမားတစ်ယောက်က ဖုန်းကစာတိုတွေပို့ပြီး ခြိမ်းခြောက်ခံရတဲ့အခါ ကစားဖော်တစ်ယောက်က ပြောတယ်။ ‘မာတင်က ဒီလိုဖြစ်စေဖို့ ခွင့်ပြုတဲ့အတွက် သူ့ကိုပဲ အပြစ်တင်ဖို့ ရှိတယ်’တဲ့။ တခြားသူတွေကလည်း မာတင်က ထိခိုက်လွယ်လွန်းတဲ့အတွက် လွယ်ကူတဲ့ပစ်မှတ်ဖြစ်စေတယ်လို့ ကဲ့ရဲ့ကြတယ်။
မုဒိမ်းမှုမှာ မုဒိမ်းကျင့်ခံရသူကို အနေအထိုင်မတတ်လို့ဆိုကာ လက်ညှိုးထိုးပြီး ဆင်းရဲတဲ့သူတွေကိုတော့ ပျင်းလို့ မတက်ကြွလို့ဆိုပြီး ပြစ်တင်မယ်။ စိတ်ရောကိုယ်ပါမကျန်းမာဖြစ်နေသူတွေကတောင်မှ သူတို့နေထိုင်မှုစနစ်က ဆိုးရွားလွန်းလို့ ဖြစ်ရတာဆိုပြီး အပြစ်ဆိုမယ်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ထုံးတမ်းစဉ်လာဆောင်ရွက်ချက်တွေပေါ့။
ဘာဖြစ်လို့လဲ။ ဘာဖြစ်လို့ အနိုင်ကျင့်ခံရသူကိုပဲ အပြစ်ဖို့ကြတာလဲ။ ကျွန်မကို့ရဲ့ ကမ္ဘာကြီးဟာ လုံခြုံပြီး သမာသမတ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အတွေးအမြင်တွေနဲ့ မတရားမှုခံစားနေရသူတွေရဲ့အဖြစ်က ထိပ်တိုက်တိုးနေလို့ပဲ။ ခံစားရသူက အပြစ်ကင်းစင်လေလေ ကျွန်မတို့ကိုယ်တိုင် ကာရံထားတဲ့ ဆင်ခြင်သိစိတ်ဥခွံပါးပါးလေးတွေကို ခြိမ်းခြောက်လေလေဖြစ်နေတယ်။ ခံစားရသူကို အပြစ်တင်ခြင်းဟာ ကိုယ်တိုင်က အပြစ်မကင်းမှုကို ရှောင်လွှဲရုံသာမကဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကို ရှောင်တိမ်းခြင်းလည်း ဖြစ်တယ်။ လူကောင်းတွေမှာလည်း ဆိုးတဲ့အဖြစ်တွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အတွေးကတင် ကြောက်စရာကောင်းလှတယ်။
၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်တွေမှာ ဒေါက်တာ မယ်ဗင် လာနာက ဒီစိတ်သဘောတွေက လက်တွေ့သုတေသနပြုလုပ်ပြီး ရှင်းလင်းပြခဲ့တယ်။ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုမှာ တခြားလူတစ်ယောက်က လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးပြီး နှိပ်စက်ခံရတာကို လူတစ်ချှို့ မြင်တွေ့စေပြီး ကြားဝင်ဖျောက်ဖျက်ပေးလို့လည်း မရတဲ့အခါမှာ လူတွေဟာ ခံစားရသူကိုပဲ နှိမ့်ချစော်ကားကြတယ်။ အံသြကြောက်ရွံ့စရာရယ်။ မတရားမှုက ပိုပြင်းထန်လေ လူတွေရဲ့ အပြစ်ခံရသူကို စော်ကားမှုကလည်း ပိုပြီးပြင်းထန်လေပဲတဲ့။
ဝမ်းနည်းနာကျင်စရာက ခံစားရသူတွေကလည်း သူတို့အပြစ်လည်းပါတယ်ဆိုကာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အပြစ်ဖို့ကြတယ်။ အနိုက်ကျင့်ခံရသူတွေဟာ မလုံခြုံစိတ်၊ မိမိကိုယ်မိမိ မယုံကြည်ခြင်း၊ မျှော်လင့်ချက်ပျောက်ဆုံးမှုတွေ ဖြစ်လာတတ်သလို သူ့ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ရေးတွေလည်း ကျိုးပဲ့တတ်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အနိုင်ကျင့်သူတွေက သူတို့ပြုလုပ်တဲ့ မကောင်းမှုအတွက် နောင်တရအပြစ်ခံစားစိတ်ရှိမယ် ထင်ပါသလား။ ကျေးဇူးပြုပြီး နည်းနည်းလေးတောင် အဲဒီလို မတွေးလိုက်ပါနဲ့။ ဗိုလ်ကျသူတို့ဟာ သူတို့အပေါ်သူတို့ ယုံကြည်မှုတွေတိုးကာ ပိုလို့လက်ရဲဇက်ရဲဖြစ်လာကြသတဲ့။
အွန်လိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်မှုကို ဘယ်လိုကျော်ဖြတ်တားဆီးမလဲ။ ကလေးတွေအတွက်တော့ အနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့အခါမှာ တုန့်ပြန်နည်းတွေ အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့။ လျစ်လျူရှုပါ။ မှတ်တမ်းကို သိမ်းဆည်းထားပါ။ လူကြီးမိဘတွေကို တိုင်ပါ။ အနိုင်ကျင့်သူနဲ့ အဆက်အသွယ် ဖြတ်ပါ။ ဆိုင်ရာပိုင်ရာ websites တွေကို တိုင်ကြားပါ စသည်ဖြင့်ပေါ့။ လူကြီးကျတော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ တိုင်လို့မရသလို လျစ်လျူရှုလိုက်လို့မရတဲ့ အခြေအနေတွေလည်း ရှိလာတယ်။ ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။
ဗြိတိန်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းခွင်အနိုင်ကျင့်မှုအကြံပေးဖုန်းလိုင်းက ပြောတာကတော့ အင်တာနက်ဆိုင်ရာ စော်ကားအနိုင်ကျင့်မှုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ ခံရသူပြုလုပ်နိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံးအရာက ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့တဲ့။ ခါးသီးစရာကောင်းလှပါလား။ ဘုရားဟောသလို ဆဲတာကို ဆိတ်ဆိတ်နေပြီး လက်မခံတဲ့အခါ ဆဲသူဆီပြန်သွားတယ်ဆိုတဲ့နည်း လျစ်လျူရှုခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတရားအတိုင်းပါပဲ။
ကျွန်မရဲ့ဖြေရှင်းနည်းကတော့ ပထမဆုံးအကြိမ် ပြင်ဆင်ထားခြင်းမရှိဘဲ ကြုံလိုက်ရတဲ့အခါမို့ အကျည်းတန်သွားခဲ့ပါတယ်။ ရိုင်းစိုင်းအနိုင်ကျင့်သူကိုတင်မက သူ့အားပေးသူတွေပါ အဆက်အသွယ်ဖြတ်လိုက်တာက လွန်ကဲမှုဖြစ်သွားရဲ့။ ဝမ်းနည်းပါတယ်။ အသက်တစ်ရာ မနေရ၊ အမှုတစ်ရာပွေရ ဆိုသလို နောက်ထပ်လည်း တွေ့ကြုံလာနိုင်တယ်။ ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မသေမချင်းတော့ ရှေ့ဆက်သွားနေရဦးမယ်။ လူဖြစ်ရတဲ့ ဒုက္ခပေါ့လေ။ သေးသေးသိမ်သိမ်ရှုတ်ချတိုက်ခိုက်မှုများကို ဥပေက္ခာပြုရင်းနဲ့ ရှေ့ဆက်ပါဦးမယ်။ ဒါဟာ ဘဝဖြစ်တယ် မဟုတ်လား။
Ref: . Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the Challenge of Online Social Aggression, Threats, and Distress by Willard, Nancy E. (2007)
Why Do People Bully? by Marshall, Jessica (2010, April 1).
Why Do We Blame Victims? When others' misfortune feels likeathreat. by Juliana Breines, Ph.D.
စာရေးသူ မယ့်ကိုး at 3/16/2014 12:02:00 PM2comments:
မိသားစုရုပ်တုကို အမြန်ဆုံးအပြီးသတ်ချင်ပေမယ့် အလုပ်ခန်းထဲဝင်လို့မရအောင် တစ်စုံတရာက ကျွန်တော့်ကို ဟန့်တားနေတယ်။ ပန်းပုကို ဆက်လက်စိစစ်၊ ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာဖို့ကိုလည်း ကျွန်တော့်ကို ကျွန်တော် ကန့်ကွက်နေတယ်။
ပန်းပုထုခြင်းဖြစ်စဉ်မှာ ရုပ်လုံးပေါ်လာပေမယ့် အနုစိတ်မရောက်သေးခင်မှာ အဓိပ္ပါယ်တစ်စုံတစ်ရာကို မဖော်ထုတ်နိုင်သေးဘူး။ ဒီအချိန်မှာ အာရုံစိုက်ပြီး အလုပ်လုပ်ဖို့လိုသလို ဘာတွေက အနှောင့်အယှက်လဲ ဆိုတာ သိဖို့လိုတယ်။ အတိတ်အရိပ်တွေကို လုံလောက်ပြည့်စုံအောင် မစုဆောင်းနိုင်သမျှ ကျွန်တော်အပြီးသတ်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ ပြောသံကြားနေမိတယ်။ ဒါကြောင့် ကြေကွဲခြင်းတွေက ပန်းပု ထုထည်ပေါ် တရိပ်ရိပ်လိမ့်တက်လာတာကို အချိန်ပေးပြီးစောင့်တယ်။
စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှုကိုကျော်လွှားပြီး အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်တွေ ရောမွှေပြီး နောက်ထပ်နာကျင်မှုတွေမဖြစ်ရအောင် ထည့်သွင်းမြှုပ်နှံကြည့်ချင်တယ်။ အမေ့ပုံလေးကို မြေစမ်းခရမ်းပျိုးနေရင်း အမေ့ပုံရိပ်ဟောင်းတွေ မြင်ယောင်ကြည့်တယ်။ ဓာတ်ပုံဟောင်းတွေကို စတူဒီယိုထဲမှာ ဖြန့်ခင်းထားမိတယ်။
အမေက ကျော့ရှင်းလှပတဲ့ အလယ်တန်းပြဆရာမတစ်ယောက်ပါ။ နှစ်ဘက်ဆွေမျိုးတွေကြားထဲမှာ ဝင့်ထည် နာမည်ကောင်းရှိသူပေါ့။ အဖေ့ရုပ်တုထက် အမေ့ရုပ်တုက ပိုမိုအဆင်ပြေမယ် ထင်ရပေမယ့် အဆင့်များစွာ ဖြတ်သန်းရတာပါပဲ။ တစ်ခါတလေနှေးကွေးသွားပြီး တစ်ခါတရံနုံးချိမောပန်းလာတယ်။
ကျွန်တော်က ပန်းပုထုရင် သူဘာတွေလိုချင်နေလဲလို့ နားထောင်လေ့ရှိတာမို့ အမေ့ပန်းပုရဲ့ အသံကိုလည်း နားစွင့်ထားဖြစ်တယ်။ အမေ ကျွန်တော့်ကို ဘာတွေပြောချင်သေးလဲ။ အမေ မဖြေလို့ ကျွန်တော်တစ်ကိုယ်တည်း တွေးရတယ်။ အတွေးနဲ့တင် ကျွန်တော် ထိတ် လန့်နေတယ်။
ခင်ဗျားပန်းချီဆွဲတဲ့အခါ၊ ပန်းပုထုတဲ့အခါအဲဒီပုံရိပ်ကို မေးခွန်းတစ်ချို့မေးဖူးလား။ ကျွန်တော် အမေ့ကို မမေးရဲဘူး။ အရှုံးပေးချင်လာတယ်။ မျက်နှာချင်းဆိုင်နိုင်စွမ်းမရှိဘူး။ အမေ့ကို ကျွန်တော် အကဲဖြတ်မိမှာ ကြောက်တယ်။ ခွင့်လွတ်ပါလို့တောင်းပန်ရင်း လက်တွေက အမေ့မျက်နှာကောက်ကြောင်းတွေကို ပုံဖော်နေမိတယ်။ အမေ့ကို ဘယ်အချိန်တည်းက ကျွန်တော် ဆုံးရှုံးခဲ့ပါလိမ့်လို့ စဉ်းစားမိချိန်မှာ မျက်ရည်ကျလာတယ်။
ရုတ်တရက်ပဲ အမေ့လုံချည်စကိုဆွဲပြီး တကောက်ကောက်လိုက်ခဲ့တဲ့ ကလေးငယ်တစ်ယောက်ဟာ ကျွန်တော်ဖြစ်သွားတယ်။ အမေက ကျွန်တော့်ကို ချစ်မြတ်နိုးစွာ ထွေးပွေ့ထားတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေ ဘယ်အချိန်တုန်းက နောက်ဆုံးပွေ့ဖက်ခဲ့လဲဆိုတာ မမှတ်မိတော့ပေမယ့် တစ်ချိန်တုန်းကတော့ အမေ့ရဲ့ လုံခြုံနွေးထွေးတဲ့လက်တွေထဲမှာ ကျွန်တော်ပျော်ခဲ့ဖူးမှာပဲ။
အမေ့ရဲ့မေတ္တာပြည့်ဝတဲ့မျက်ဝန်းတွေကို မြင်ယောင်ကြည့်မိတယ်။ အမေလည်း ကျွန်တော့်ကို ချစ်ခဲ့သလို ကျွန်တော်လည်း အမေ့ကို အတိုင်းအဆမဲ့ချစ်ခဲ့ကြောင်းကိုပဲ ဈာန်ဝင်စားနေမိတယ်။ ကျွန်တော့်လက်တွေရပ်လိုက်ချိန်မှာ အမေ့မျက်လုံး၊ အပြုံးကို ပုံ ဖော်ပြီးနေပြီဆိုတာ တွေ့လိုက်တယ်။ ရင်ထဲက ကိုက်ခဲနာကျင်မှုတွေဟာ ရုတ်ချည်းပျယ်လွင့်သွားတယ်။ မမှတ်မိတော့တဲ့အချိန်က အချစ်ခံခဲ့ရတာကို စိတ်ကူးယဉ်မိတဲ့အခါ လက်ရှိဘဝဟာ နေသာလာတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ ညီတစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ကို မိသားစုပန်းပုထုခိုင်းလေသလား။
အမေ့ရုပ်တုကို ထိတွေ့နေစဉ်မှာ ကြည်နူးခြင်း၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်းအလယ်မှာ ခြံရံပြီးရပ်နေရသလို ချမ်းမြေ့သက်သာရာရတယ်။ အမေက နူးညံ့ကြင်နာစွာပြုံးနေပြီး အမေ့ဆီက နွေးထွေးမှုကိုရတယ်။ အမေ့ကို ကျွန်တော်ဖက်တွယ်ထားသလိုခံစားရပြီး အမေ့ရဲ့ထွေးပွေ့မှုကို ပြန်လည်ခံစားမိတယ်။ ကျွန်တော့်ကိုချစ်ခဲ့တဲ့အမေ ပြန်ရောက်လာတယ်။ အမေက နူးညံ့ကြင်နာပြီး ကျွန်တော်လည်း အမေ့အပေါ် စိုးရွံ့အားနာစိတ်တွေမရှိဘဲ ပကတိကြည်လင်ပျော်ရွှင်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီစိတ်ကို ကြာရှည်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မှာလားဆိုတာ မသေချာဘူး။ ကြေကွဲပုံရိပ်တွေက တဖျပ်ဖျပ်ပေါ်လာပြန်တယ်။ ကျွန်တော်က အမေ့စိတ်တိုင်းကျသားတစ်ယောက်မဖြစ်ခဲ့ဘူးလေ။ ခွင့်လွှတ်ပါအမေလို့ တောင်းပန်မိတယ်။
စိတ်မကောင်းစရာက အမေက ကျွန်တော့်ကို မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းမရှိစေ ချင်ပေမယ့်လည်း ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေက မိန်းကလေးတွေချည်းပဲ။ ကျွန်တော့် အခြေအနေတွေက ကျောင်းဆရာမဖြစ်တဲ့အမေ့ကို အရှက်ရစေသလား။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝ မသိတတ်စဉ်မှာတော့ အမေက ကျွန်တော့်ကို ယုယခဲ့မှာပဲ။ အဖေ ကျွန်တော့်ကို ရိုက်နှက်တိုင်း မတားဆီး၊ မဖျန်ဖြေခဲ့ပေမယ့် ကျွန်တော့်အပေါ် မေတ္တာမပျက်ကြင်နာတယ်လို့ ယုံကြည်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော် ခံစားရတာတွေကိုပြောပြရင် အမေနားလည်ပြီး နှစ်သိမ့်လက်ခံလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ခဲ့မိတယ်။
ဒါပေမဲ့ 'ကျွန်တော် မိန်းကလေးတွေလိုနေချင်တယ်။ မိန်းကလေးတွေနဲ့ပဲ ဆော့ချင်တယ်'ဆိုတဲ့ ကျွန်တော့်စကားအဆုံးမှာပဲ အမေက ဒေါသသံတုန်တုန်ယင်ယင်နဲ့ ကျွန်တော်ဟာ ယောက်ျားလေးစိတ်နဲ့ ယောက်ျားလေးသာဖြစ်တဲ့အကြောင်း၊ အဲဒီလိုမပြောဖို့ အကြောင်းပြောတယ်။ အံ့သြစရာကောင်းတာက အဲဒီအချိန်ကစပြီး အမေက ကျွန်တော့် ဖြစ်တည်မှုကို လျစ်လျူရှုတာပဲ။ အမေက ကျွန်တော့်ကို အကြွင်းမဲ့ချစ်နိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် အရှိအတိုင်း လက်မခံနိုင်ပါလားလို့ စဉ်းစားမိတယ်။
ကလေးငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ဘဝမှာ အမေက အားကိုးအတွယ်တာရဆုံး၊ အယုံကြည်ရဆုံးမဟုတ်လား။ လောကမှာ တန်ဖိုးအထားရဆုံးလူတွေက မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် ရက်စက်သွားရင် ခင်ဗျားဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲ။ မိဘဆိုတဲ့ ကျေးဇူးဂုဏ်တလိမ့်တုံးအောက်မှာ ခံစားသိမြင်သမျှကို လှိမ့်ခြေပစ်ရတိုင်း အရိုးအသားတွေညက်ညက်ကြေသွားသလို နာကျင်ခံစားရတယ်။
မိသားစုနဲ့ကျွန်တော်ဟာ တစ်မိုးအောက်မှာနေရင်း နှင်းထုပိတ်ကာနေသလို အသံကြားပေမယ့်မမြင်နိုင်၊ အေးစက်မှုန်ရီစွာမြင်နေရပေမယ့် မထိတွေ့ နိုင်ဘဲ တစ်သီးခြားစီနေခဲ့ကြတယ်။ မိသားစုက မီးလင်းဖိုဘေးက လုံခြုံသိုက်ဝန်းတဲ့တစ်ဘက်မှာ၊ ကျွန်တော်က အေးခဲမှောင်မိုက်နေတဲ့ အထီးကျန်ဘက်ခြမ်းမှာပေါ့။
ကျွန်တော်တို့ကြားက ဖွင့်မပြောဖြစ်တဲ့ စကားလုံးတွေဟာ လိမ်ညာမှုတွေအဖြစ် အသွင်ပြောင်းလာတယ်။ ကျွန်တော့်ကိုကျွန်တော်သိုဝှက်ရင်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်သံသယထားနေကြတယ်။
စာရေးသူ မယ့်ကိုး at 3/07/2014 08:09:00 AM4comments:
အိမ်မှာတော့ အဖေ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော့်ကိုယ်ဖြစ်အောင် သတိနဲ့ထိန်းညှိထားရတယ်။ အဖေ့မြင်ကွင်းမှာ တတ်နိုင်သမျှ ကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်းဖြစ်အောင်နေရတယ်။ အတွင်းစိတ်နဲ့ ဟန်ဆောင်မှု - ဘဝနှစ်ခုကို ညီမျှအောင် တစ်ပြိုင်တည်းထမ်းနေခဲ့တယ်။
ဒီလို ပင်ပင်ပန်းပန်းကြိုးစားပေမယ့် ကျွန်တော့်ရင်ထဲကို အဖေက လှမ်းမြင်နိုင်ပြီး ကျွန်တော့်ကို ကြည့်တဲ့အကြည့်တွေဟာ သရော်ရိပ်တွေပါဝင်နေတယ်။ သူ့ကို လှည့်စားမရဘူးလို့ ပြောနေသလိုပဲ။ ကျွန်တော်လည်း မတတ်နိုင်ပါဘဲ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ဟန်ဆောင်မှုတွေဟာ လက်တစ်ဖဝါးစာအဖုံးဖြစ်ပြီး လက်တစ်ပွေ့စာခံစားမှုဒယ်အိုးကို လုံအောင်မကာနိုင်သလိုရယ်လေ။
အဖေအရက်မူးလာတဲ့အချိန်တွေကို ကြောက်တယ်။ အသိစိတ်မဲ့နေတဲ့ အဖေက အော်ဟစ်သောင်းကျန်းတတ်တယ်။ ကျွန်တော် ဘယ်မှာပဲပုန်းအောင်းနေနေ ကျွန်တော့်ကိုခေါ် ပြီး ရိုက်တတ်တယ်။ နံရံကို ကျွန်တော့်ခေါင်းနဲ့ဆောင့်တယ်။ ကျွန်တော့်ကို လက်သီးနဲ့ထိုး ခြေနဲ့ကန်တတ်တယ်။ ကျွန်တော့်မှာ မိန်းမဆန်ခြင်းဆိုတဲ့အပြစ်ရှိလို့ ဒီညှင်းပန်းမှုကိုရသင့် တယ်လို့ခံယူပြီး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာနာကျင်ရပေမယ့် အဖေဘယ်လိုသင်သင် ကျွန်တော့်ရဲ့စိတ်က ပြောင်းလဲလို့ မရနိုင်ပါဘဲ။
အိုးကောင်းလိုချင်ရင် နာနာရိုက်ရတယ်ဆိုသလိုမျိုး အဖေက ကျွန်တော့်ကို ရိုက်နှက်ပြီး ပုံသွင်းခဲ့တာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အဆက်မပြတ်အရှက်ခွဲခံရမှုကြောင့် ကျွန်တော့်အတွက် အဖေက အရိပ်တကြည့်ကြည့်အတုယူကြည်ညိုစရာမဖြစ်ဘဲ ရှောင်ပုန်း စရာဖြစ်လာခဲ့တယ်။
ကျွန်တော်က ယောက်ျားလေးတွေအပေါ်မှာပဲ စွဲလမ်းမှုရှိတယ်လို့ဝန်ခံရင် အဖေ ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတာ မသေချာဘူး။ ကျွန်တော့်ကို ပြုပြင်ယူမယ်ဆိုကာ အဖေ အသေသတ်လိမ့်မလား။ ဒါမှမဟုတ် သားအဖြစ်က စွန့်လွှတ်မှာလား။ ကျောင်းမှာ ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ တွဲမှာစိုးရိမ်ပြီး ကျွန်တော့်ကိုကျောင်းထားပေးပါဦးမလား။ ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာက တစ်ခုတည်း။ ကျွန်တော့်သဘာဝအတိုင်း နေချင်ခဲ့တာပါပဲ။ သူငယ်ချင်းတွေက အဖေနဲ့သူငယ်ချင်းတွေလို ချစ်ကြတာမြင်ရတိုင်း နာကျင်ခံစားရတယ်။
အဖေက ကျွန်တော့်ကိုချစ်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပေမယ့် မယုံရဲခဲ့ဘူး။ ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့မေတ္တာကို သံသယဝင်သွားတာမဟုတ်ပါဘူး။ ခင်ဗျားနားလည်ချင်မှ နားလည်မယ်။ အဖေ့ကို မုန်းတယ်လို့ ကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူး။ ကျွန်တော်အရိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ကြိမ်လုံးနဲ့ အဖေ့ကိုတွဲပြီး မမြင်ချင်တော့တာ တစ်ခုပဲ။
အဖေ့ ကို စိတ်မပင်ပန်းစေချင်ဘူး။ ကျွန်တော့်ကို မမုန်းစေချင်ဘူး။ အခုပန်းပုထုနေတဲ့ ကျွန်တော့်ကို မျက်ခုံးတွန့်ပြီး မျက်လုံးစူးစူးနဲ့ စိုက်ကြည့်မနေစေချင်ဘူး။ အဖေ့ရုပ်တုကို ထုနေရင်း ကျွန်တော့်အပေါ်အဖေထားခဲ့တဲ့ ကြိတ်မနိုင်ခဲမရအမျက်ဒေါသနဲ့ ယူကြုံးမရစေတနာတွေကို ခံစားနေရတာ ဝန်ခံပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဖေ့ကို ကျွန်တော့်အတွေးထဲမှာ အကဲဖြတ်စီရင်ချက် ချသလို မလုပ်ချင်ဘူး။
အဖေ ကျွန်တော့်ကို ခွင့်မလွှတ်နိုင်ပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ အဖေ့ကို နား လည်ချင်တယ်။ လေးစားကြည်ညိုချင်တယ်။ ဒါဟာ အခုအချိန်မှာ မဖြစ်နိုင်သေးတဲ့အရာလား။ စိတ်က ဆက်လက်ရွေ့လျားနေပေမယ့် လက်က ရပ်တန့်သွားတယ်။ အတိတ်ကို ပြန်တွေးကြည့်တိုင်း အဖေ့ဒေါသနဲ့ ရင်ဆိုင်တွေ့ခဲ့တာ၊ ချစ်ခင်တွယ်တာစိတ် ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာတွေပဲ လှိုင်လှိုင်ပွင့်လန်းလာတယ်။
သိစိတ်နံရံမှာ စွဲထင်နေဆဲ အဖေ့ရဲ့အေးစက်တဲ့ဆက်ဆံရေး၊ နာကျင်စေတဲ့ အကြမ်းဖက်အုပ်ချုပ်မှုတွေ၊ လျစ်လျူရှုရက်စက်မှုတွေ၊ အမျက်ထားမှုတွေကို ကျွန်တော့်ရုပ်တုထဲ မထည့်ချင်ဘူး။ အဖေက ပန်းပုထုသူရဲ့ဖခင်ဖြစ်ရုံသာမကဘဲ ရိုးရာထုံးတမ်းအစဉ်အလာအရ အိမ်ဦးနတ်ဆိုတဲ့ ကြည်ညိုလေးစားစရာပုံရိပ်ကို ကိုယ်စားပြုသူလည်း ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါ ကျွန်တော် မတတ်နိုင်တော့ဘူးထင်တယ်။
ရုပ်လုံးပေါ်လာတဲ့အဖေ့ပုံရိပ်ကို ကျွန်တော်ကြောက်ပြီး နောက်ဆုတ်နေမိတယ်။ ခဏနားတော့ အဖေ့ဓာတ်ပုံဟောင်းတွေရယ်၊ ကလေးဘဝက ပုံဆွဲစာအုပ်ကို ထုတ်ကြည့်မိတယ်။ ပုံတွေမှာ အဖေ့အပေါ် မကျေနပ်စိတ်၊ မေတ္တာကို မျှော်ကိုးအားငယ်စိတ်၊ အသနား ခံစိတ်တွေကို ပြန်တွေ့ရတယ်။ နာကျင်မှုကို ထွင်းထုနိုင်တယ်ဆိုတာ အနုပညာပိုင်းဆိုင်ရာတော့ ကျေနပ်စဖွယ်ဖြစ်ပေမယ့် ဘက်မျှစေမယ့်ရသတစ်မျိုး ကျွန်တော်ရှာဖွေချင်သေးတယ်။ မေတ္တာ၊ ကရုဏာ၊ ကိုယ်ချင်းစာညှာတာခြင်းဆိုတဲ့ ကြည်နူးချမ်းမြေ့မှုသိင်္ဂါရရသကို။
အဖေ့ကို ပကတိအတိုင်းနားလည်ချင်တဲ့အတွက် ဒီပန်းပုထုဖြစ်ပေမယ့် အဖေ့အရိပ်တွေကို အလုံးစုံဖမ်းမိဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်။ အနုပညာဆိုတာ နှလုံးသားရဲ့အတွင်းပိုင်းကလာတဲ့ ရိုးသားမှုနဲ့သာ တည်ဆောက်သင့်ပေမယ့် ဆက်မထုတော့ဘဲ ခဏရပ်ထားလိုက် တာ ကောင်းမယ်ထင်တယ်။ ဆေးမခြယ်ဘဲ၊ မီးမဖုတ်ဘဲ ဒီအတိုင်းပဲ အခြောက်ခံထားရင် တောင် ရွံ့စေးရုပ်တွေက ကြာရှည်ခံပါတယ်။ ပန်းပုထုတယ်ဆိုတာ အချိန်၊ လူအားနဲ့ ပညာသာမဟုတ်ဘူး။ စိတ်နှလုံး၊ ထက် သန်မှု၊ အာရုံဇောအားလုံးပေးရတာ မဟုတ်လား။ သိပ်ပင်ပန်းနေပြီမို့ ပန်းပုကို ခဏမေ့ ထားဦးမယ်။
ပန်းပုထုတယ်ဆိုတာ ပန်းတစ်ပင်ပျိုးသလို၊ လူတစ်ယောက်နဲ့ ကျွမ်းဝင်သလို အချိန်ယူပျိုးထောင်ရတဲ့အနုပညာမဟုတ်လား။ ပန်းပုရုပ်က အဆင်သင့်မဖြစ်သေးခင် တစ်ဖက်သတ် တိုက်တွန်းလို့မရဘူး။ ပန်းပုရုပ်တွေက စကားပြောတတ်တယ်။ ခင်ဗျားလည်း ပန်းပုထုတဲ့အခါ ခင်ဗျား လက်ချောင်းတွေက ပုံသွင်းလောင်းနေစဉ်မှာပဲ ပုံပြင်တွေကြားလာလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဖွင့်ထားတဲ့စိတ်နဲ့ ပန်းပုရုပ်စကားပြောလာမယ့်အချိန်ကို စောင့်တယ်။ ခင်ဗျားလည်း အလျင်မလိုစေချင်ဘူး။ ခင်ဗျားရဲ့ဝိညာဉ်၊ ခံစားချက်၊ မသိစိတ်တွေကိုယုံကြည်ရင်း ရွေ့လျားသွားတာ အကောင်းဆုံးလို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။
အဖေ့ရုပ်တုက စကားတွေပြောလာတော့မှာကို ကျွန်တော်သိနေတယ်။ အဖေနဲ့ဝေးရာကို ရှောင်လိုက်ဦးမယ်။ မီးဖိုချောင်ထဲကို ခဏသွားနေမယ်။ ပန်းပုရုပ်မှာ တွဲဆက်နိုင်တဲ့ ပစ္စည်းဆန်းကလေးတွေက မီးဖိုချောင်ထဲမှာ ရှိတတ်ပေမယ့် အခု ဖျော်ရည်အေး တစ်ခုခုသောက်ချင်တယ်။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ပန်းပုထုတယ်ဆိုတာ အဖေ့ကို ပိုသိအောင်လုပ်တာ၊ အရိုအသေပေးချင်တာ၊ ဂုဏ်ပြုအလေးအမြတ်ထားချင်တာပါ။
ကျွန်တော်လုပ်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာ မသေချာဘူး။ အဖေ့ကို အပြစ်မတင်ရဲဘဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သာ ရန်ရှာချင်နေမိတဲ့ စိတ်က နှလုံးသားမှာ အမြစ်စွဲနေပြီ။ ခက်တယ်။ ဘယ်လိုပဲ ရုပ်တုကို အဆုံးမသတ်မချင်ပေမယ့် ဒါမဖြစ်မနေလျှောက်လှမ်းရမယ့်ခရီးဖြစ်နေတယ်။
ပန်းပုကို အမြန်ဆုံးလက်စသတ်ပြီး ပလတ်စတစ်လွှာနဲ့ ထုပ်ထားလိုက်တယ်။ ရွံ့ရုပ်တုက ဖြည်းဖြည်းချင်းအခြောက်ခံဖို့လိုအပ်တာမို့ ပလတ်စတစ် ပတ်ထားတဲ့အခါ မြန်မြန်ခြောက်မသွားတော့ဘူး။
ပလတ်စတစ်စလျှောကျလာတော့ ခွချလိုက်ပေမယ့် မီးမမြိုက်တော့ဘူး။ ဆေးခြယ်အရောင်တင်ဖို့မဆိုထားနဲ့ ပန်းပုကို လက်ဖျားနဲ့မျှ မထိရဲသေးဘူး။
မကြာမီ ထုတ်ဝေဖြန့်ချီသွားမယ့် အရေးပေါ်အခန်းထဲမှာ လုံးချင်းဝတ္ထုရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ဒေသများကို blog မှာ အလျင်းသင့်သလို ဖော်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုမယ်လို့ မျှော်လင့်ရင်း :)
စာရေးသူ မယ့်ကိုး at 3/04/2014 09:34:00 PM3comments:
မင်္ဂလသုတ် (၈) - Trustworthy Friends, True-hearted Friends & Spiritual Friends